Maitiro ekukudziridza desktop desktop mu macOS | Ndinobva mac
Maitiro ekudzora saizi desktop desktop pane macOS
Apple yagara ichizivikanwa nekupa huwandu hukuru hwesarudzo dzekugadzirisa kana uchigadzirisa zvishandiso zvedu kana tiine dambudziko rekuona. Pakati pesarudzo dzekugadzirisa, macOS inotibvumira wedzera kana kudzikisa saizi yemifananidzo inoratidzwa pane desktop yekomputa yedu
Kuwedzera kana kudzikisa saizi yemifananidzo yedesktop pakombuta yedu kunogona kutibatsira kuisa zvimwe zvinhu pakombuta (kudzikisa saizi yavo) kana kungo wedzera saizi yavo kuti uone zvirinani zita uye chikamu chezviri mukati. Maitiro aya ari nyore kwazvo uye kubva ini ndiri kuMac tinokuratidza maitiro atinogona kuzviita.
Zvakanyanya wedzera sekuderedza saizi yemifananidzo kubva kudesktop yedu, tinofanirwa kuzviisa pese pacho pairi uye tinya pane kurudyi mbeva bhatani kana tinya neminwe miviri pane trackpad.
Tevere, tinya pane Ratidza sarudzo sarudzo. Mune menyu inoratidzwa pazasi, tinoona kuti iyo default icon saizi iri 64 × 64 madhi. Kana isu tichida kuwedzera kana kudzikisa saizi yemifananidzo, isu tinongofanirwa kutsvedza bhawa kuruboshwe, kana tichida kuti riite diki, kana kurudyi, kana tichida kuti riwedzere.
Sarudzo inotevera inotibvumira seta faira nzvimbo pane desktop grid, nenzira iyi tinogona kuwedzera kana kudzikisa nzvimbo pakati pemafaira. Izvo zvakare zvinotibvumidza isu kukudza iwo iwo mavara saizi emafaira pane desktop yedu pamwe nekushandura chinzvimbo chemafaira emafaira.
Uye zvakare, inotibvumidzawo ratidza thumbnail preview yemafaira, pamwe nefaira refaira, rakanakira kana tiine madhairekitori kana mifananidzo yakawanda paMac desktop yedu.Kana tangoita shanduko dzese dzatinoda, tinovhara hwindo. Nguva dzese dzatinoita shanduko, inozoonekwa ipapo padesktop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzora saizi desktop desktop pane macOS
Tichaona HomePod yekutengesa isingasviki mazana maviri euros?
Iyo Pad, iyi ndiyo shongwe yavari kuvaka muDubai iyo yakavakirwa paPod